Thwebula RealPlayer Cloud 1.12.45 isizulu – Android – Vessoft
Thwebula RealPlayer Cloud
RealPlayer Cloud – a software ukuze Ukuhlela amafayela emidya in USB cloud. Isofthiwe ikuvumela ukulanda futhi amafayela umbono media kusuka USB ifu in high. RealPlayer Cloud ivunyelwanise ne-akhawunti olunikeza ukufinyelela amafayela kumadivayisi ezahlukene. Isofthiwe futhi kwenza ukuba bashintshisane idatha e-mail, noma Facebook ngokwakha links. RealPlayer Cloud unikeza okulinganiselwe indawo server kodwa kungenziwa lenyuka ngemali eyengeziwe.
Cinisekisa amafayela emidya in USB cloud
Usekela for takhiwo multiple
Okulandwayo abheka amafayela emidya of service
Amazwana on RealPlayer Cloud:
RealPlayer Cloud Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Equalizer + 2.5.3